Global Voices teny Malagasy » Venezoelà: Tsy alefa intsony ny fandaharana Ry Simpson · Global Voices teny Malagasy » Print
Venezoelà: Tsy alefa intsony ny fandaharana Ry Simpson
Voadika ny 28 Mey 2018 7:28 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 18 avrily 2008)
Toa tsy dia mankasitraka loatra ny sarimiainan'i Matt Groening “Les Simpson ” ny governemanta venezoelana. Noraràna tsy ho azo alefa tamin'ny fantsona fahitalavitra tsy miankina ao Venezoelà, noho ny baikon'ny governemanta, ity fandaharana mitohy amerikana ity. Heverina fa nahazo fitarainana maromaro ity sampan-draharaham-panjakana ity satria nalefa tamin'ny 11 ora atoandro Ry Simpson. Hafahafa ihany raha nahazo fitarainana tao Venezoelà ity fandaharana nanana ny lazany efa ampolony taona maro ity. Saingy niteraka fahatafintohinan'ny vahoaka ity fandraràna, nambara tamin'ny fandaharana tselatra manokana, ity. Tsy noho ny fahatampohany ihany fa noho ny fanoloana ny fandaharana nisy azy ho lasa “Alerte à Malibu”.
Actitud [es] niteny hoe: 
Heverina ho mivantana loatra ry Simpson ka dia noraràna tao Venezoelà. Ny olana dia hoe nahoana no elave aty aoriana vao nandray fanapahan-kevitra toy izany amin'ity fandaharana mitohy malaza dia malaza ity.
Avy any Arzantina, amin'ny “Blogus”, fanehoan-kevitra iray masiaka kokoa :
Aoka re ry Chavez ! Tsy mampino hoe lasa ilay endrika sariitatra fanesoana anao tokoa ianao, lasa hevitra stalinista ny hevitra sosialista, lasa mitovy amin'ny fanao amin'ny fanapenam-bava any amin'ny fitondrana jadona ny fanaraha-maso ny fampitam-baovao. Aoka izay ! Mahafantatra izahay, amin'ny maha-Amerikana-Latina anay, amin'izay mitranga any amin'ireo mihevi-tena ho mpamonjy izao tontolo izao; hivaly any amin-dry zareo foana ireny na ho ela na ho haingana. Tsy mbola nahazo lesona tamin'ny faharesenao tamin'ny referandaoma ihany ve ? Tsia ry Chavez, tsy Ry Simpson kosa! Tsy mbola azonao ve ra na dia azo ampifanakaikezana amin'ny endrika fianakaviana tandrefana aza ry zareo, dia natao ho fitsikerana ny fiarahamonina ao Etazonia izy io? Raha tsy tianao hitovy endrika amin'ny fianakavian'i Homer ny endrika fianakaviana maodely aminao dia avelao ny fiarahamonina sy ny ankizy hanapa-kevitra (amin'izay tiany hojerena na tsia).
Namaly ihany koa  ny bilaogy Noticias y entretenimiento [es]:
Nilaza tamintsika ny sampan-draharaham-panjakana manara-maso ny fampitam-baovao fa “mampiana-dratsy” ny tsy ampy taona ilay fandaharana.
Tsy ho afa-mijery an-dry Simpson intsony ny kilonga Venezoelana. Noteren'ny governemantan'i Chavez ho esorina amin'ny programan'i Televen (tambajotra tsy miankina) ry Homer, Marge, Bart, Lisa ary ry Maggie. Efa manana solony sahady ilay fandaharana: ry bokonozatra mpahay lomano mpitondra fitafy mena avy ao amin'ny Alerte à Malibu (Oh! “Mampiana-tsara” kosa an!).
Milaza  i Periodista digital [es]:
Nitsabaka tamin'ny fahitalavitra ny filoha venezoelàna, ho fiarovana ny kilonga. Mihevitra izy fa “mampiana-dratsy ny ankizy” ilay fandaharahana ka nanapa-kevitra fa ry zareo miborindandridan'ny “Alerte à Malibu” no ho fialamboliny, fandaharana iray “tsy mampiady hevitra loatra” io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/28/120119/
 Les Simpson: http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Simpson
 niteny hoe:: http://actitudme.blogspot.com/2008/04/los-simpson-cencurados-en-venezuela.html
 fanehoan-kevitra iray masiaka kokoa: http://gustavorey.blogspot.com/2008/04/los-simpsons-prohibidos-en-venezuela.html
 Namaly ihany koa: http://www.notientre.com/2008/04/prohben-los-simpsons-en-venezuela.html